I-China Hot Melt Glue Shee Shoe Puff kunye ne-Counter Izinto zokuvelisa kunye neFektri | Ifayile yeWode
Ishushu seMelt Glue Shee Shoe Puff kunye nezinto zokulwa
Isixhobo: Ifayibha, iglu
Ubunzima: Ngokomgangatho, ubukhulu kunye nobukhulu
Ukupakisha: ngumqulu okanye iphepha
MOQ: 1000 amaphepha
Ukusetyenziswa: izihlangu zesikhumba, izihlangu zabakhenkethi, izihlangu ze-soprt, izihlangu zabafazi
1.Production Line: Thina imigca esibhozo ukuvelisa
2.Sineemveliso ezininzi zokuthengisa ezishushu
Ezifana nebhodi ye-fiber insole, ibhodi ye-insole ene-eva, iphepha le-TPU elishushu elinyibilikayo, iphepha le-ping pong elishushu, iphepha lebhokisi le-insole, ibhodi ye-insole, i-antistatic insole, ibhodi ye-shank, ilaphu elingenalo nto, izinto ze-insole, ifilimu ye-TPU eshushu.
Ipakishwe ngeshiti okanye kuluhlu, ihlala iliphepha elingu-25 kwibhola nganye okanye iimitha ezingama-50 kuluhlu ngalunye.
* Ngeempawu zobhetyebhetye, umphezulu ogudileyo, Nomoya olungileyo emva kokugqitywa kwemveliso Ukuqina okunamandla kunye nokuguquguquka okuphakathi.
* Kwinkqubo yokunyibilika, ubushushu bufuna ukufikelela kwi-120-160 degree, ixesha li-12-20s,
* Kufuneka uhlengahlengise ubushushu ngokobungakanani kunye nokuqhutywa kwe-thermal.
* Akufuneki ubeke iglu kuyo, ebunjiwe ngokuthe ngqo, umanyano oluphezulu, akukho lula ukuyaphula.
* Akukho lula ukukhubazeka emva kokunyibilika, inokuphinda isebenze kwakhona.
* Kufanelekile ukuba izihlangu zamadoda nezabafazi, izihlangu zomkhosi, izihlangu zokubaleka, izihlangu ezinyukayo, izihlangu zegalufa, izihlangu zemidlalo kunye nezihlangu zeshishini, izihlangu zokhuseleko, kunye neengxowa kunye namatyala, njl.
I-Q1: Ngaba uyinkampani yokuthengisa okanye yokurhweba yebhodi ye-insole, iphepha lekhemikhali, iphepha elinyibilikayo elishushu?
I-A1: siyibhodi ye-insole ekhethekileyo, iphepha leemichiza, iphepha elinyibilikayo elingaphezulu kweminyaka eli-15, umzi-mveliso wethu une-R & D yethu, qhubeka uhlaziya imveliso yethu
Q2: Ndingalufumana njani iisampulu?
A2: ukuba ufuna iisampulu, singenza isicelo sakho. iisampulu zisimahla, kodwa kuya kufuneka uhlawule ukuthuthwa kwemithwalo enokubuyiselwa kuwe emva kokuba ubeke iodolo.
Q3: Yimalini ukuthuthwa kwempahla kwiisampulu?
I-A3: Imithwalo ixhomekeke kubunzima obupheleleyo kunye nobungakanani bokupakisha kunye nendawo yakho.
Q4: Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana iisampulu?
I-A4: Iisampulu ziya kuba zikulungele ukuhanjiswa ngeentsuku ezi-3, iisampulu ziya kuthunyelwa ngokudlulisa kwaye zifike ngeentsuku ezi-3 ukuya kwezi-10.
I-Q5: Ungayifaka njani iodolo nawe?
I-A5: Enye indlela kukuba ungasithumelela iinkcukacha zakho zoku-odola nge-imeyile okanye ngefeksi, emva koko sinokwenza i-invoice yakho ye-proforma, emva koko uhlawule idiphozithi kuthi, emva koko sikulungiselele iimveliso. Enye indlela kukuba ungabeka iodolo kuAlibaba ngokuthe ngqo, enokunika isiqinisekiso seinshurensi yakho, kukukhuseleka ngakumbi, njengoko kukho umntu wesithathu uAlibaba anika isiqinisekiso sakho sokuqinisekisa ukuba ungazifumana iimveliso zesicelo sakho.
I-Q6: Ngaba ndingazimela iimveliso zakho elizweni lam? Ukuba ndifuna ukumela iimveliso zakho, zithini iimfuno zakho?
I-A6: Okwangoku, kwelinye ilizwe sinearhente, ukuba ufuna iarhente yakho kwilizwe lakho, kufuneka usixelele ukuba uliphi ilizwe kunye nesiXeko, kwaye ungakanani imali ethengiweyo kunyaka omnye, oku kuya kuthethathethwana emva kokuba ubeke umyalelo wokuqala kunye nathi.
Egqithileyo ilaphu lokunyibilikisa isincamathelisi eshushu
Okulandelayo: iphepha le-ping pong elishushu liyanyibilika
I-1.5mm Toe Puff Counter Ishushu iyanyibilika
Isikhonkwane seenzwane esintsonkothileyo kunye nokubala okungasemva
Ikhawuntari kunye neenzwane zokukhupha izihlangu
Ubhontsi ongenawo umlenze kunye neCounter
Isikhonkwane seToyi esenziwe ngokutsha nesokuBala
Isihlangu seenzwane sokukhuphela kunye nokubala okungasemva
Izihlangu ze-Thermoplastic Shoes Puff kunye ne-Counter Material
Izinto zenzwane kunye neZinto zokuBala
Umnwe wokukhuphela kunye neCounter
Umtya wokukhupha iinzwane kunye neCounter yezixhobo zezihlangu
Umtya wokukhupha uzwane kunye nezinto zokuBala
Umnwe wokukhuphela kunye nokuQinisa isiQinisi
Ukuqina kweToe Puff Counter Stiffener
Iphepha le-Velvet elishushu liyanyibilika
iphepha le-ping pong elishushu liyanyibilika
ilaphu lokunyibilikisa isincamathelisi eshushu
I-TPU ishushu inyibilika iphepha leglue
Ibhodi ye-Insole Board ene-Eva, Ilaphu elingenagwele kunye noEva, Ibhodi ye-Insole noEva, Iphepha lezinto ze-Shoe Insole, Inaliti Punch Nonwoven Ilaphu, Ilaphu nonwoven elaminethiweyo kunye Eva Foam,